प्रदेश २: एक युवकको हत्या आरोपमा मामाभाञ्जा पक्राउ - हाम्रो जनकपुर
प्रदेश २: एक युवकको हत्या आरोपमा मामाभाञ्जा पक्राउ
२०७७ चैत्र १८, बुधबार २०:१८
राजा झा/जनकपुरधाम। सर्लाहीमा एक युवकको हत्या गरेको आरोपमा दुईजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मलंगवा नगरपालिका वडा नं. १० का २५ वर्षीय सुशिलकुमार यादवको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मामा र भान्जालाई सार्वजनिक गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका वडा नं. १० का ४५ वर्षीय विमलकान्त पाठक र बिहार सीतामढीका ४१ वर्षीय अशोक झा छन्।
चैत १२ गते बुधबार सुशीलको शव मलंगवा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित पचगछियामा टाउको काटेको अवस्थामा फेलापरेको थियो। सोही दिन प्रहरीले मामा विमलेन्द्र पाठक र भान्जा अशोक झालाई पक्राउ गरेको थियो।
सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले सुशील र विमलकान्त पाठकबीच पहिला पनि विवाद भएको बताए। राठौरका अनुसार करिब ६ महिना पहिला विमलकान्त पाठकको घरमा चोरी भएको थियो। पाठकले सुशीललाई चोरीको आरोप लगाएका थिए। त्यही कारण उनीहरुबीच विवाद थियो।
प्रहरी उपरीक्षक राठौरले भने, ‘तिनीहरुबीच पटक–पटक झैंझगडा हुँदै आएको थियो। झगडा हुँदै आएको कारण सुशीलकुमार यादवले आफूलाई मार्न सक्छ भनि विमलकान्त पाठकले मौका मिलाई सुशिलकुमार यादवलाई मार्ने योजना बनाएको थियो।’
अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्त मामा–भान्जाले सुशिललाई लागुऔषध अत्याधिक सेवन गराइ हत्या गरेको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताए।
‘घटना भएको दिन चैत ११ गते बेलुका करिब ८ बजे विमलकान्त पाठक र निजको भान्जा अशोक झा मलंगवा नगरपालिका वडा नं. १० स्थित होटलमा रक्सी, मासु र चना खाएका थिए। त्यहाँबाट निस्केपछि सुशिल साइकल चढेर आउँदै गरेकोमा प्रतिवादीहरुले सुशिललाई तिमीसँग काम पनि छ, गाँजा पनि खानुपर्छ जाउँ भनेर आफ्नो घर लगेका थिए’, राठौरले भने, ‘तीनै जना विमलकान्त पाठकको घरमा करिब सावा ९ बजे पुगेर विमलकान्त र सुशिलले लागुऔषध नाइट्राभेट ट्याब्लेट सेवन गरेको थिए भने पुनः तीनै जनाले गाँजासमेत सेवन गरेका थिए।’
पक्राउ परेका मामा–भान्जाले सुशिललाई घरमा खाना खुवाएर घर परिवारका सदस्यहरु आ–आफ्नो कोठामा सुत्न गएपछि पुनः संगै बसी गाँजा तथा अन्य लागुऔषधहरु सेवन गर्ने क्रममा योजना बनाएको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताए।
मामा–भान्जाले सुशिललाई लागुऔषध गाँजा तथा ट्याब्लेटहरु सेवन गराइ लठ्ठ पारेर डोरीले हात खुट्टा र जीउ बाँधेर तथा आवाज नआओस् भन्नको लागि मुखमा गम्छा कोचेर हतियारसहित घटनास्थलमा लगेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ।
विमलकान्तले आफ्नो घरभन्दा करिब ४/५ सय मिटर पूर्व सुशिललाई लगेर अशोकले घुडाले सुशिलको पेट तथा छाती थिचेर राखेको र विमलकान्तले ल्याएको धारिलो हतियारले सुशिलको घाँटी रेटेको प्रहरीको भनाइ छ।
पक्राउ परेकामध्ये विमलकान्त २०६९ साल भदौ १२ गते लागुऔषध नाइट्राभेट ९ ट्याब्लेट र कोरेक्स १ बोतलसहित पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धान पश्चात उनी २०६९ असोज १४ गते २ हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राखी तारिखमा छुटेका थिए।